Sharing For All: Gtalk Theme
G-Talk နှင့် စာရိုက် ဆက်သွယ်ရာတွင် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ပုံလေးတွေ ပေးပို့ထည့်သွင်းပေးပို့ ပေးနိုင်မဲ့ အောက်ပါ နည်းလမ်းလေးကို အနည်းငယ်မျှ အပင်ပန်းခံပြီး မိမိအသုံးပြုနေသော စက်မှာ ပြုလုပ် ပေးလိုက်ပါ။ (၁၅) မိနစ် စာ အလုပ်လေးပါ။
အောက်မှာ ညွှန်ပြထားတဲ့ အတိုင်းသာ လုပ်သွားပါ။
Virus မပါ ကြောင်း နှင့် ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားပြီးကြောင်း ကြိုတင် ပြောပြ လိုပါတယ်။
နဲနဲ လေး အပင်ပန်းခံတာ နဲ. များများကြီး ကြည်နူး ပျော်ရွှင် ရပါလိမ့်မယ်။
MyTheme.exe ကိုဒေါင်းပြီး run လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် gtalk>setting>Appearence>Chat Theme>My Theme ကိုရွှေးပြီး ok ပေးလိုက်ရင် ပြီးသွားပါပြီ။ပြီးရင် ကိုယ့်gtalk ကို singout ပြန်လုပ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ :haha , :atb , :ilu , :imu , :tc ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရင်
Comment တွေကို Start>All Program>Dash>My Theme>Help မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။နောက်ခံပုံလေးတွေချိန်းတာကတော့
Start >All program >Dash > MyTheme >Sample Images မှာ
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံကို ကူးထည့်လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် Start >All program >Dash > MyTheme >Change Background မှာ ကိုယ်ကူးထားတဲ့ပုံလေးကို ရွေးပြီး အိုကေပေးလိုက်ရင် အိုကေသွားပါပြီ .....။
အသုံးတည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ ... ။
How to use smileys ?
( Smiley လေးတွေဘယ်လိုသုံးကြမလဲ ? )
ဖိုင်လေးနဲ့ လိုချင်ရင်တော့ ဒီဘေးလေးကနေ ယူလိုက်ပါနော်။ G-Talk themes.txt
* G-Talk နှင့် စာရိုက် ဆက်သွယ်ရာတွင် Smiley လေး ထည့်သုံးချင်ရင်
"Shift" သုံးပြီး " : " အရင်နှိပ်ပါ။ ထို.နောက် အောက်ပါ အညွှန်းမှ Eng:
စာလုံးလေးများ ဖြည့်စွက် ရိုက်ပေးပါက G-Talk တွင် လှပဆန်းသစ်သော
Smiley လေးများ ထည့်သွင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါမည်။
အကြောင်းအရာ ရိုက်ရန် မြန်မာလို
All the Best :atb (သိပ်ကောင်းတယ်)
Angel :angel (နတ်သမီးလေး)
Angry :angry (စိတ်ဆိုးတယ်)
Applause :clap (အားပေးပါတယ်)
Bath :bath (ရေချိုးနေတယ်)
Blushing :blush (မျက်နှာနီအောင်ရှက်တယ်)
Call me :callme (ဆက်သွယ်ပါ)
Cool :cool (အေးအေးဆေးဆေးပါ)
Crying :waa (ငိုနေတယ်)
Day Dreaming :dream (နေ.လည်ခင်းအိပ်မက်)
Dislike :naa (မကြိုက်ပါ)
Do Not Disturb :dnd (မနှောက်ယှက်ပါနှင့်)
Game :game (ကစားမယ်)
Ghoting :ghoting (စဉ်းစားနေတယ်)
Good Morning :gm (ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ)
Good night :gn (ကောင်းသောညပါ)
Heart :heart (အချစ်)
Hi :hi (နှုတ်ဆက်တယ်)
Hai :hai (နှုတ်ဆက်တယ်)
Hug :hug (ပွေ.ဖက်မယ်)
I am Mad :mad (ငါရူးတော့မယ်)
I love you :ilu (မင်းကိုချစ်တယ်)
I miss you :imu (မင်းကိုသတိယနေတယ်)
Idea :idea (အကြံရပြီ)
Kissing :kiss (နမ်းမယ်)
Laughing :ha (ရီရတယ်)
Laughing :haha (ဟားတိုက်ရီရတယ်)
Love struck :love (ချစ်ကြောင်းပြောမယ်)
Mess :mess (စားမယ်)
Movie :movie (တီးထည့်လိုက်ရမလား)
News :news (သတင်း)
No :no (မ_ဘူး)
Not talking :calm (မပြောဘူး)
Now :now (ယခု)
On Phone :call (Ph နှင့်ပြောမယ်)
Pray :pray (ဆုတောင်းနေတယ်)
Raised Eyebrow :cha (မျက်ခုံးတွန်.ပြီး နောက်ပြောင်)
Secret/Silent :shh (တိတ်တ်ိတ်နေ)
Shut Up :shutup (ပါးစပ်ပိတ်ထားပါ)
Sleep :sleep (အိပ်နေတယ်)
Sleepy :zz (အိပ်ချင်ပြီ)
Smug :mm (မျက်ခုံးပင့်ပြီး နောက်ပြောင်ခြင်း)
Sorry :sry (၀မ်းနည်းပါတယ်)
Stop shouting :stop (နားပိတ်ထားတယ်)
Surprised :oh (အံသြတယ်)
Take care :tc (ဂရုစိုက်ပါ)
Thanks :thanx (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
Wait :wait (ခဏစောင့်ပေးပါ)
Waving :bye (နှုတ်ဆက်ပါတယ်)
Worried :wor (စိတ်ပူနေတယ်)
Yahooooo :yahoo ( ရှာကြည့်ပါ)
Yes :yes (ကောင်းပါပြီ)
Posted by Coralchitthu at 1:14 AM
အပျင်းပြေ မျက်စိပြူးချင်သူများ အတွက်.......
အိပ်ချင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်တော့ comment လေးရေးခဲ့ပေါ့ဗျာ....
သင်သိဖို့လိုအပ်မည့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော ဥပဒေ ၅ချက်
၁။ အင်္ဂလိပ် grammar ကို အများကြီး မလေ့လာပါနှင့်။ ဒီအချက်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေအတွက် ထူးဆန်းနေပါတယ်။ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ် စကားပြောရာမှာ အရေး...
စာအုပ်များ ဒေါင်း နိုင်သည်...
ကိုဘတင် _ နက္ခတ္တ ဒီပနီကျမ်း < http://www.mediafire.com/? zx3o2vjjyzi > ကင်းဝန်မင်းကြီး _ နေမိ ရကန် < http://www.mediafire.com/? zz...
( ၂၄) ပစ္စည်း ပဌာန်းဒေသနာတော်
ပခုက္ကူ ရွှေမုတ်ဌောဘုရားမှာ ဆရာ SS ခင်မောင်အေး လှူဒါန်းထားတဲ့ (၂၄)ပစ္စည်းအကျယ်ကို ပုံနှင့်တကွသေချာရှင်းပြထားတာပါ ။ အားလုံး ပဌာန်းဒေသနာတော်ကို ...
ဘယ်လို Kiss လေးတွေပေးချင်ကြတာလဲ???
၁။ နတ်သမီးအနမ်း ချိုမြိန်ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိစေတဲ့ အနမ်းလို့ အချစ်ကျမ်းဆရာတွေက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြပါတယ်။ ဒီအနမ်းဟာ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့မျက်လုံး...
သင့်ဘဝရဲ့လက်ကျန် အချိန်ကို သင် ဘယ်လို အသုံးချသင့်သလဲ ?
မိတ်ဆွေ !!! သင်၏ မိသားစုနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရာထူးတို့ ကို ဘယ်အချိန် အတိုင်းအတာထိ သင် ပို...
စိတ်ဓာတ်ခွန်အား စကားစုများ ...
သင်တို့သည် တဲများထဲ၌ အိပ်မနေကြနှင့်၊ ကမ္ဘာကြီးသည် ရှေ့သို့သွားနေတယ်၊ ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူ ရှေ့သို့ ချီတက်သွားကြပါ။ (မာဇင်နီ ) ...
ယုံစမ်းပါ ခင်ရယ်... အိမ်ထောင်သက် အတန်အသင့်ရပြီး လင်မယားနှစ်ဦးကျီစယ် ကလူပြုနေကြစဉ်.....ဇနီးဖြစ်သူက မေး၏။ ဇနီး ။ "မောင်...ကျွန်မ သေသွာ...
Mozilla Firefox အတွက် Keyboard အသုံးဝင်ပုံ
ဒီနေ့တင်တဲ့ Post လေးကတော့ အင်တာနက်ကိုကျနော်လိုဘဲ Mozilla Firefox ကိုအမြဲတမ်းသုံးစွဲနေကြသူတွေအတွက် သိသင့်တဲ့ Keyboard တစ်ခုလုံးရဲ့အသုံးဝင...
Bat File (1)
Defence Hacking (1)
English ကဏ္ဍ (18)
Graphic and Animation (1)
players and skins (3)
Site ကောင်းလေးတွေ (9)
Software များ (25)
Window system services (1)
စိတ်ဓာတ်ခွန်အား စကားစုများ (8)
အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရဖြစ်ရပ်လေးများ (2)
Window system services
Cyber လုံခြုံရေး အကြောင်း သိကောင်းစရာ..
For English Learner
ဤ ဘလော့ဂ်တွင် ဖော်ပြထားသော အချို့အကြောင်းအရာများကို အခြားအခြားသော ဘလော့ဂ်များတွင်လဲ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည် ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်တွင် တင်ထားသမျှသည် ကျွန်တော် လိုချင်သောအခါ အလွယ်တကူ ရရှိရန် နှင့် မသိရှိသေးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လာရောက်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းတို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်ပါ။
Copyright by Coralchitthu. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.